Ny tantaram-pitiavan'i Steven Nzonzi momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaona tsy hita isa
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Ny tantaram-pitiavan'i Steven Nzonzi momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaona tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny tarika frantsay iray fantatry ny anarany "Nzonzi". Ny tantaran'ny tantaram-pitiavan'i Steven Nzonzi momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa izy dia anisan'ireo 23 lehilahy mpilalao frantsay izay nahazo ny mondialy 2018 ao Rosia fa vitsy ihany no mandinika ny Bio Bio Steven Nzonzi izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Steven Nzonzi tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika bebe kokoa -Voalohandohan'ny fiainana
Manomboka ny anarany feno dia Steven N'Kemboanza Mike Nzonzi. Teraka tamin'ny 15th of December 1988 tao Colombes, Frantsa tamin'ny ray aman-drenin'ny hazakazaka mifangaro. Ny rainy, Nzonzi Snr dia avy any Kongo raha ny reniny dia avy amin'ny fiantsoana Frantsay.
Niroborobo tany amin'ny tanàna ambanivohitr'i Colombes, i Young Nzonzi dia nanana fiandohana ara-drariny teo amin'ny fiainan'ny mpivady roa sy rahalahy iray. Na izany aza, ny rainy (izay nanosika an'i Steven avy amin'ny klioba rehefa nahatsapa hoavy saro-takarina ho an'ny zanany lahy) dia nahatonga azy hahafantatra fa ny hoavy dia ho an'ireo izay mandray fanapahan-kevitra mialoha.
Nahita azy ny baolina ka nanomboka ny asany tamin'ny lalao baolina kitra tao Racing Paris tamin'ny taona faha-10 ary nitarika azy tamin'ny dingana manaraka ny fandrosoana tamin'ny fikambanan'ny zatovo marobe, anisan'izany SC Levallois (1994-1999), Paris Saint-Germain (1999-2002) , CA Lisieux (2002-2003) sy SM Caen (2003-2004).
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Fandrosoana Football
Steven Nzonzi dia mbola tsy fantatra hatramin'izao tamin'ny alàlan'ny fikambanany tanora mba hanomboka hanangona siramamy rehefa tafiditra tao amin'ny klioba SC Amiens U19 tao 2005 izy ary navotsotra tao amin'ny ekipa ekipa senioran'ny 2009.
Tao amin'ny SC Amiens, Nzonzi dia nampiseho fahaizana baolina kitra izay nahatonga ny tanindrazany DR Kongo, Frantsa ary Angletera hikatsaka ny fiarovana ny serivisy ho an'ny ekipam-pireneny. Nzonzi nitazona an'i Nzonzi fa i Frantsa ary nahazo ny laharana voalohany iraisam-pirenena niaraka tamin'ny ekipa frantsay 21 teo amin'ny 2009.
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Mitsangàna mba haka izany
Nona nankany amin'ny Blackburn i Nzonzi ary nandroso tamin'ny asa fiasan'ny mpilalao matihanina. Tamin'ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny 2011-2012 dia tafiditra tao amin'ny tanànan'i Stoke izy ary nanao fampisehoana mahatalanjona izay nahazoany ny loka 2014-15 amin'ny taona nahazoany talohan'ny nifindrany tany Sevilla tao amin'ny 2015.
Tao Seville, Nzonzi dia nanatsara sy nitazona ny endriny ambony indrindra, nahazo ny Ligin'ny UEFA Europa tao 2016 niaraka tamin'ny klioba ary nanao ny ekipan'ny UEFA Europa League amin'ity vanim-potoana ity.
Mba hamehezana azy rehetra dia nomeny voninahitra ny fanasana hilalao ho an'ny ekipa nasionalin'i Frantsa ao amin'ny Fiadiana ny amboara eran-tany 2018 Fifa izay narahiny tamim-boninahitra niaraka tamin'ny ekipan'ny lehilahy 23. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Relationship Life
Nzonzi tsy nanana fifandraisana tsara indrindra noho ny antony tsy voafehiny. Mialà sasatra rehefa mitondra anao amin'ny fitsangatsanganana ny fitiavany ny fitiavany ao anatin'ny telo taona.
Ny International iraisam-pirenena dia niaraka tamin'ny Stoke City raha nanambady ny vadiny vavy ankehitriny, Lynda Nzonzi tao amin'ny 2013 taorian'ny volana maromaro nifampizarana izay nafenina. Toa tsara avokoa ny fanambadian'izy ireo izay notahiana niaraka tamin'ny zanak'i Ayden. 4 volana taorian'ny nahaterahan'ny zanany lahy, nijanona fitsarana i Nzonzi taorian'ny niampangan'ny vadiny azy ny hamelezany azy eo anoloan'ny zanak'izy ireo noho izy niantso azy ho 'Dady tsy misy ilana azy'.
Ny fanoherana ny fiampangan'i Nzonzi dia nanindry fa izy dia niezaka ihany ny hampitony ny vadiny (izay hita fa tezitra be) tamin'ny fisamborana ny neniny rehefa niresaka momba azy tsy misy ilàna azy nandritra ny resaka nifanaovany tamin'ny reniny
Ny fiarovana an'i Nzonzi dia nandeha tsara tamin'ireo mpitsara tao atsimon'i Cheshire izay nanala azy tamin'ny fanafihana. Andro iray taorian'ilay fitsaràna Lynda dia nanao fangatahana fisaraham-panambadiana amin'i Nzonzi nanamafy ny fizarazarana tamin'ny filazàna fa 'nopotehina' ny fanambadian'izy ireo.
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Fampitahana amin'i Patrick Vieira
Steven Nzonzi dia efa ela, raha ampitahaina amin'ny tantara an-dàlambe Patrick Vieira avy amin'ny maro, anisan'izany ny gazety Espaniola. Ny fandalinana tsara momba ny fampitahàna dia manambara fa tsy hentitra loatra izy ireo ary indrindra indrindra indrindra amin'ny fotoan'io lahatsoratra io rehefa miala ao Sevilla ho an'ny Arsenal i Vieira.
Patrick Vieira, mpitantana ny kianja Niece dia mpilalao baolina kitra izay niasa tsara tao Arsenal ho mpilalao midiadika afovoany, toerana iray nibaribary tamin'ny tenany i Nzonzi. Hatramin'ny nialan'i Vieira tamin'ny klioba tao amin'ny 2005, sarotra dia sarotra ny nametraka an'i Arsenal izay manana ny fepetra feno an'i Vieira izay hita tao amin'ny Nzonzi.
Ankoatra izany, samy manana tarehimarika lehibe avokoa ny Vieira sy ny Nzonzi miaraka amin'ny taloha izay manana ny haavon'ny 1.93m ary ity farany dia mamafa kely amin'ny 1.96m !. Mba handrakofana azy rehetra dia samy nahazo ny kaomisera FIFA manerantany miaraka amin'ny ekipam-pirenena frantsay.
Na izany aza, i Nzonzi dia tsy mihevitra fa mihatra amin'ny angano izy rehefa nanamarika fa:
Manan-danja aho, milalao ny toerany mitovy ary izaho Frantsay no mazava ho azy, afaka manao ny fampitahana ianao fa tsy azoko antoka fa rariny izany satria sarotra ny mifanaraka amin'izay nataony.
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Fikambanana tsy mavitrika
Na dia nanao zavatra be aza i Nzonzi mba hialana amin'ny adihevitra, ny fihetsiny taorian'ny famonoana an'i Sevilla 5-0 an'i Barcelona tao amin'ny Fiadiana Fiadiana Espaniola tao 2018 dia nanontany ireo mpankafy hoe aiza ny lainga. Sevilla dia niasa tena sarotra tamin'ny fiatrehana ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra Espaniôla fotsiny mba ho voadaroka an'i Barcelona miaraka amin'ny sisin'ny tanjany izay nahatonga ny klioba hivoaka ho malemy.
Tamin'ny fiafaran'ilay fifaninanana, Nzonzi dia nanao fahadisoana roa noho ny antony voalohany, ny voalohany dia ny fandàvany ny hisaotra ireo mpankafy noho ny fanohanany ireo mpankasitraka rehetra tamin'ny alalan'ny baolina kitra espaniola ary ny iray hafa, izay niteraka hatezerana dia ny fanapahan-keviny hiditra ao amin'ny club night club Madrid ny andro iray Nifandona mafy ny pejy.
Tsapany fa ny vazivazy vokatry ny fanapahan-kevitr'izy ireo no noporofoin'ny maro fa nosakanan'i Nzonzi izay naka azy tany Seville, dia nanambara ny fialantsiny namaky hoe:
"Te-hiala tsiny amin'ireo mpankafy Seville aho," hoy i NZonzi. "Nanao fahadisoana aho satria nandao ny lalao. Ny zava-nitranga dia sarotra ho an'ireo mpilalao ihany koa. Miresaka isaky ny telo andro isika, miaina irery, manofana ary miverina mody any an-trano. Izaho dia any an-trano foana. Omaly dia nisy ny fianakaviako sy ireo namako ary izaho dia niala. "
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Fifandraisana amin'ny Zanaka
Steven Nzonzi dia nanohy nihazona fifandraisana akaiky tamin'ny rainy sy i Ayden zanany, na inona na inona ny fanambadian'ity rava ity. Ny ray mirehidrehana izay mbola mila fifandraisana hafa hatrany dia tsy mitsahatra ny mampakatra sarim-pitiavana ny tenany sy ny zanany lahy, anisan'izany ny tifitra iray mampiseho azy hankalaza ny mpiaro ny Mondialy miaraka amin'i Ayden.
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Mitantara ny maha-olona
Ny maha-olona an'i Nzonzi dia be dia be amin'ny antsipiriany, ka tsy misy olona tonga amin'ny famaranana mikasika ny tena izy. Na izany aza dia nanazava i Nzonzi fa matetika izy no mampiseho fihetseham-po mitsonitina amin'ny alàlan'ny fitongilanana sy ny fihetseham-po eo amin'ny sehatry ny lalao.
'Miala tsiny aho eo amin'ny fiainana, fa eo am-pitoerana, afaka mahazo fahasorenana sy fihetseham-po tokoa aho, misy fahasamihafana lehibe. Tena sarotra amiko ny tenako, hatramin'izay. Tsy tiako ny fandehan-javatra tsy hita. Manapaka azy tsara kokoa aho amin'izao fotoana izao fa mbola, indraindray dia somary kivy be aho indraindray. '
Nosoratan'i Steven Nzonzi ny tantaram-pitiavam-pahalalana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana- Facts hafa
Nzonzi dia nanonofy foana ny hilalao amin'ny lalao fiadiana tompon-daka, ny nofy iray izay toa azo tanterahina rehefa nametraka sambo ho an'ny arsenal.
Raha tao Stoke City i Nzonzi dia nandrakotra ny 134miles tamin'ny lalao 19, lavitra izay nanavaka azy tamin'ny mpilalao hafa.
Ny kaonty media an'ny tambajotra sosialy dia tarihin'ny Life career.
Manizingizina izy fa ny anarany dia voasoratra ho Nzonzi fa tsy N'Zonzi
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Steven Nzonzi momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Bafetimbi Gomis Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Nabil Fekir Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Dimitri Payet Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra